musha » Tenga Pinterest Inofarira
Ndeapi mabhenefiti andichaona kana ndikatenga Pinterest Anofarira?
Inokurudzira vamwe kuti Vade & Komenda pane ako mapositi
Inowedzera yako masheti muHashtag iwe iwe wakashandisa
Inobatsira kukusundira kune iyo "hutachiona" maitiro
Vamwe vanonyanya kuda Kuda, Tarisa & Taura pane yako maficha
Oda anonunurwa zvakakwana mukati memaawa makumi maviri nemana
Nei ndichifanira kutenga Pinterest Anofarira?
Likes angangodaro ari akakosha metric iyo muteveri kana anokwanisa muteveri anotarisa kana ivo vachiona yako mbiri. Izvo zvakakosha zvakanyanya kuti zvaunofarira zvienzane nemuteveri wako kuverenga kuchengetedza kutendeka pakati pevateereri vako. Kana iwe account iine 20,000 Vateveri uye chete makumi maviri Anofarira, zvinozokonzeresa vateereri vako kubvunza zviri pamutemo uye kubatanidzwa kwevateveri vako. Kana iwe ukatenga maLikes, iwe unogona kuwedzera iwo Anofarira kune vateveri chiyero pane yako mbiri. Izvi zvakaratidzwa kuwedzera kusangana kwehupenyu nevateereri vako.
Zvandinofarira zvePinterest zvichaendeswa riini?
Kuona sevhisi yemhando yepamusoro uye kuendesa, isu tinoongorora zvega zvega zvekutengesa. Naizvozvo, zvinogona kutora kusvika maawa makumi maviri nemana kuti odha yako itange. 24% yenguva iyo odha yako ichatanga mukati maawa mashoma kana zvishoma. Kana iwe uine hodha hombe inoenderera zuva rega rega kudzamara sevhisi yaunzwa zvizere.
Yedu masevhisi ari 100% akachengeteka kushandisa. Kusiyana nevazhinji vanopa masevhisi isu hatikumbire kana kuda password yako yeMedia Media Account. Naizvozvo, isu hatisi kudzora account yako kana kuiraira kuti iite chero chinhu icho chaisingafanirwe kunge ichiita. Iwo masevhisi atinopa anoedzwa asingaverengeke nguva uye anoenderera nekuvandudza uye kushanduka pamwe neSocial media application kuti ave nechokwadi chemhando yepamusoro uye zvakanakisa mhedzisiro. TurboMedia.io yanga ichipa zvemhando yepamusoro uye zvine hunyanzvi hweMedia Media Kushambadzira pamhepo.
Pinterest Anofarira akawedzerwa kungoro yako.